Umaki: izibalo zokumaketha ze-imeyili | Martech Zone
Umaka: izibalo zokuthengisa ze-imeyili
Imizamo Yakho Yokumaketha Nge-imeyili Ayinendaba Uma Ungeyona I-Mobile Optimized
NgeSonto, Agasti 31, 2014 NgoLwesine, ngoMashi 3, 2016 Douglas Karr
Njengoba besifuna ukwenza ngcono ukuzibandakanya kwethu, into yokuqala esiyenzile ukusebenzisa izibonisi ze-imeyili eziphendulayo sisebenzisa ipulatifomu yethu, i-CircuPress, ukusabalalisa okuqukethwe (Bhalisa nsuku zonke noma ngeviki). Ukushintshwa kwezibalo kwakungamangalisa neze. Sithumela i-imeyili yethu yamasonto onke kubabhalisi abangaphezu kwama-70,000 ngoMsombuluko futhi ama-analytics ethu asikhombisa ukuthi lokho kuyisiphukuphuku sezimoto zethu ngaphezu kwanoma iyiphi enye indlela noma iphromoshini. Akuzange kwenzeke kuze kube
Izibalo Zokumaketha Nge-imeyili Okufanele Uzazi
ULwesine, May 22, 2014 Douglas Karr
Angiqiniseki kakhulu ukuthi zonke izibalo zokumaketha ze-imeyili lapha zibalulekile ekumaketheni kwakho kwe-imeyili, kepha ezimbalwa zazo zigqama kimi: Imali ekhangisa nge-imeyili ngokumangalisayo iphansi futhi ayisetshenziswa kakhulu. Ngiyamangala njalo kubhulogi lethu ukuthi isikhangiso sikanhlokweni siyathengisa njalo… kepha akekho noyedwa othengile ukukhangisa encwadini yethu yezindaba yansuku zonke neyamasonto efinyelela kwababhalisile abangaphezu kwama-75,000 masonto onke. Ukwamukelwa Kwe-imeyili kuphezulu, nge